IiNkuni zoMlilo IiMpahla zokuBhisa kunye nokuthelekisa
Imifuno emihle kakhulu neyona mibi kakhulu yokusetyenziswa kweenkuni
Uza kufumana iziphumo ezilungileyo kunye nokushisa okuthe xaxa ngomthamo womthi xa usitshisa ukugqithisa (ubunzima) ukhuni ongayifumana. Imithi enomthi izakuvelisa i-BTU ephezulu kakhulu, kodwa yonke imithi kufuneka ibe "i-season" kwiziphumo ezilungileyo. Ixesha lokunciphisa i-seasoning linciphisa umxholo womswakama kwaye amandla angaphantsi asetyenziswa ukuqhubelela amanzi okunciphisa ukushisa.
Ininzi yale mihlathi enzima ineendawo ezivuthayo ezivuthayo phakathi kwezigaba ezintathu zokhuni xa zitshiswa.
Isigaba sokugqibela "sokubambisa" kubaluleke kakhulu ukugcina ukutshisa ixesha. Zonke ezona zilungileyo, kwaye ngokuqhelekileyo zinzima kakhulu kwaye zinzima kakhulu, iintlobo zeenkuni zineendawo eziphezulu zokubambisa njengoko ziqhubeka zivutha emva kokuswakama kokuqala kwaye zonke i-gasses ziyaxoshwa.
Ukhuni oluvuthiweyo oluxhasayo oluninzi luya kukwandisa ukuveliswa komlilo
Imithi ithathwa njengeyinqabileyo (ilahlekelwe ngamaqabunga ebusika) kwaye, ngokukodwa, izitshalo ezinzima zihlala zikhuni kwaye zizitshisa kwaye zide kuneemithi ezicatshangelwa ukuba zihlala ziluhlaza okanye zincinci (zikho ezinye izinto). Amatye abuye atshise xa kushiywa phantsi kwendawo yokukhusela ukunciphisa umswakama obangela ukufudumeza njengotshisa ngomthi.
Ixabiso lokushisa lomlilo lilinganiselwa kwii-BTU okanye ii-Units zaseBrithani. Ukuphakama kwexabiso le-BTU, ukufudumala okufumene nganye ngeyunithi yomthi. Oku kulandelayo yitshati yeentlobo eziqhelekileyo kunye nexabiso lokushisa ngokusekelwe kwixinzelelo, ubunzima, i-BTU kunye nobuchule bokubambisana.
Nalu uluhlu lwezinto ezilungileyo kunye ezimbi kunazo zonke ezihlawulelwe ngokwamandla abo okuqulunqa nokugcina ubushushu:
Iintlobo ezi-5 eziMnandi zoMthi
I-Hickory - i-25 ukuya kwi-28 yezigidi zeBTUs / intambo - ubuninzi be-37 ukuya kuma-58 lbs / /.
I-Oak - i-24 ukuya kwi-28 yezigidi zeBTUs / intambo - ubuninzi be-37 ukuya kwi-58 lbs / /.
Indawo eMnyama - izigidi ezingama-27 zeBTUs / intambo - ubunzima 43 lbs./cu.ft.
I-Beech - 24 ukuya kwi-27 yezigidi zeBTUs / intambo - ubuninzi be-32 ukuya kuma-56 lbs / /.
I-White Ash - izigidi ezingama-24 zeBTUs / intambo - ubunzima 43 lbs./cu.ft.
Iintlobo ezi-5 eziPhezulu zoMenzi
I-White Pine - izigidi ezili-15 zeBTUs / intambo - ubuninzi be-22 ukuya kwi-31 lbs / /.
I-Cottonwood / i-Willow - i-BTU yezigidi eziyi-16 / intambo - ubuninzi be-24 ukuya kwi-37 lbs / /.
I-Basswood - izigidi eziyi-14 zeBTUs / intambo - ubuninzi be-20 ukuya kwi-37 lbs / /.
I-Aspen - 15 yezigidi zeBTUs / intambo - ubuninzi be-26 lbs./cu.ft.
I-Poplar ephuzi - i-18 mm yezigidi zeBTUs / intambo - ubuninzi be-22 ukuya ku-31 lbs./cu.ft.
Iimpahla zeSawmills - Yintoni omele ukuyithenga?
Umthamo womthi weTape
Ummangaleli Othakazelisayo Umzobo
Indlela yokuguqula umthi usebenzisa i-Chainsaw
Amagama eColonial Amazwe aseAfrika
I-PGA Championship Golf Tournament
Ingxoxo: Yintoni e-Office yakho?
Indlela Yokuxelela Ukuba Kukho Idilesi Yoluntu
Iindlela ezili-7 zokuphuhlisa ubuchule bakho be-Psychic